Umfutholuketshezi Power System
Electric umfutholuketshezi Pusher
PROFESSIONAL IN umfutholuketshezi
Yongxiang umfutholuketshezi has ezehlukile machining amakhono; kusukela izingxenye ezincane ukuze izingxenye ezinkulu, Ivolumu ephansi noma umthamo omkhulu; imishini yethu ezihlukahlukene CNC ziyakwazi ukuthola umsebenzi.
Yongxiang umfutholuketshezi kuyinto ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 Registered Inkampani nokukhiqizwa ezisebenza ngokuhambisana ISO namazinga.
Design usizo onjiniyela ziyatholakala ku-site ukuthunyelwa ekuphenduleni nezindaba umkhiqizo futhi okuphawulekayo ubuchwepheshe lobuchwepheshe kuphela ucingo kude.
UKUSEBENZA KUSUKELA 2005